မုန်တိုင်းငယ်၏ အရှိန်ကြောင့် မန္တလေးမြို့၌ မိုး အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းခဲ့ပြီး သစ်ပင်များ လဲပြိ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ မေ ၃ဝ
မုန်တိုင်းငယ်၏ အရှိန်ကြောင့် မန္တလေးမြို့တွင် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီး လေပြင်း တိုက်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် မေ ၃ဝရက်က မန္တလေးခရိုင်အတွင်းရှိ နေရာ ရှစ်နေရာ၌ သစ်ပင်များလဲပြိုခဲ့ ကြောင်း မန္တလေးခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ ”မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ မိုးရွာသွန်းမှု ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါ သစ်ပင်တွေ လဲပြိုခဲ့တာပါ။ မဟာ အောင်မြေမြို့နယ်က တစ်နေရာ တည်းအိမ်အပေါ်ကိုပိတာပါ။ သတင်းရရချင်း ဖယ်ရှားရှင်းလင်း ပေးဖို့ ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အရန်မီးသတ်စခန်းတွေမှာလည်း အလှူရှင်တွေက လှူဒါန်းထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေရှိတော့ သစ်ပင်လဲတဲ့နေရာတွေအားလုံးကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဖြန့်ကြက်ပြီးဖယ် ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု မန္တလေးခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထက်အောင်က ပြောကြားသည်။
မေ ၃ဝရက် နံနက်တွင် မန္တလေး ခရိုင်အတွင်းရှိ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ် ၂၂လမ်း၊ ၆၂လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်းကြားတွင်လည်းကောင်း၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၆၂လမ်း၊ မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် မြောက်ဘက်တွင်လည်းကောင်း၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၁ဝလမ်း၊ ၇၈လမ်းနှင့် ၇၉လမ်းကြားတွင် လည်းကောင်း၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ် ဟေမမာလာတောင် အကွက်အမှတ် ၆၆၄တွင်လည်း ကောင်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၆၂လမ်းနှင့် ၆၃လမ်း၊ ဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းကြားတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့ နယ် ထိန်ကုန်းရပ်ကွက်တွင်လည်း ကောင်းသစ်ပင်လဲပြိုမှုများအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်း ဇော်ဦး ဦးဆောင်၍ မန္တလေးခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထက်အောင် နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်။
”ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မီးသတ်ဌာနကို အရေးပေါ် ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို သိမ်းဆည်း မှတ်သားထားစေချင်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေမီးသတ်စခန်းတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်း မှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်။ သဘာဝ ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလို့ရပါတယ်။ သတင်းရပြီဆိုတာနဲ့ အချိန်မစောင့်ပါဘူး။ မိုးရွာနေ လည်း ချက်ချင်းထွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ”ဟု ဦးထက်အောင်က ပြောသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်၍ ထူးခြားမှုရှိပါက ဗဟိုမီးသတ်စခန်း ဖုန်း ၁၉၁ယ ဝ၂-၄ဝ၆ ဝ၇၃၉ယ ဝ၂-၄၉၆ ဝ၇၃၈ယ ဝ၂-၄ဝ၆ ဝ၇၄ဝ ဗဟိုအော်ပရေတာ ဖုန်း ဝ၉- ၃၃၃ ၆၆၇ ဝ၁ သို့ ၂၄နာရီ ဆက်သွယ် အကူအညီတောင်းခံ နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
''ဇာတ်လမ်းက ကျွန်တော့်အတွက် အခက်အခဲ မရှိဘူး။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ကာရိုက်တာ မရွေးဘဲ လက်ခံ ရိုက်??
နည်းပြများ၏ ခက်ခဲသော အနေအထားကို နယူးကာဆယ်နည်းပြ ဘင်နီတက်ဇ် သုံးသပ်
အိမ်မှာနေရပေမယ့် နောက်ထပ်ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်တွေကို စီစဉ်နေတဲ့ ဖန်ပင်းပင်း